नेपालमा एउटा जमाना थियो पेजरको । बोल्न नमिल्ने सन्देश पाइने । सन्देश पनि कहिले अक्षरमा कहिले अंकमा । अक्षरमा आए त ठीकै भो कुरा बुझिने । तर, अंकमा आएचाहिँ कल ब्याक गर्नुपर्ने टेलिफोन खोजेर । झन्झटै बढी । तर, त्यो लामो टिकेन । मोबाइल आयो पेजर गयो । त्यो त राम्रै भो । तर, सँगै अर्को नराम्रो पनि भयो । नराम्रो चाहीँ के भो भने मोबाइलले पनि बेहोराचाहीँ पेजरको सिक्यो । पेजर कल ! अर्थात कल भन्दा बढी मिसकल !!
वास्तवमा मोबाइल गजवको चिज हो जसमा संसारै छ भनिन्छ । यतिसम्म कि मोबाइल बिना न त कुनै काम राम्रोसँग गर्न सकिन्छ, न त सम्बन्धलाई नै राम्रोसँग बनाइराख्न सकिन्छ । विज्ञहरु भन्छन्, अबको मोबाइल भनेको डेस्कटप, ल्यापटप, पामटप मात्र होइन राम्रो क्यामेरा पनि हो । ई बैङकीङ, ई सपीङ, ई टिकेटिङलगायत अहिलेको २१ औं शताब्दीमा ई झुण्डिरहेका सबै काम मोबाइलकै भरमा चल्छ रे अव । यसको गुण अपरम्पार छ । यसैले पनि यसका प्रयोगकर्ता बढेको बढ्यै छन् दिन दुगुना रात चौगुना । नेपालमै हेरे पनि त्यो देखिन्छ हिमाल, पहाड, तराई जताततै ।
तर, यसको गुण जति धेरै छ, अवगुण पनि उत्ति नै । अनुसन्धताहरु भन्छन्, यसले अनेकन स्वास्थ्य समस्या ल्याउछ । मुटु रोगीलाई त यो बोक्नै बन्देज लगाएका छन् डाक्टरहरुले । मानसिक तनावमा पनि कतिले यसलाई कारक मानेका छन् । यसले उत्पन्न गर्ने हुने र नहुनेबीचको देखि डिजिटल विभेदसम्मका कुरा पनि आएका छन् ।
ती सब आफ्ना ठाँउमा छन् तर सर्वसाधारणको आक्रोस चाहीँ यसको नेटवर्क समस्यामा छ । फोनै नलागेर हैरान । बल्लतल्ल लाग्दा पनि सुन्दै नसुनिएर हैरान । सुन्दा पनि कुरै नबुझिएर या बीचैमा च्वाट्ट काटिएर अर्को फसाद ।
यी भए अरुका कुरा । मेरो कुरा चाहीँ अझ बेग्लै छ । उही नाम मोबाइल, बेहोरा चाहीँ पेजरको । अर्थात मिस कल !
मोबाइलमा अहिले कल भन्दा बढी मिसकल संस्कृति हावी भएको छ । हुँदाहुँदा साथीहरु पनि भन्दैखेरि कल हैन, मिसकल गर्छु है भन्दिने भन्या ठाडै । घरिघरि त क्या टेन्सन हुन्छ सुन्दा पनि । भन्न मन लाग्छ, कि कल गर हैन भन मिसकल चाहीँ गर्दै नगर । तर, के गर्ने जति भने पनि टेर्ने भए पो !